Samsung Oo Shaacisay Mid UI 3.1 Cusboonaysiin ah oo loogu talagalay Galaxy S20, Galaxy Note 20 iyo 15 Noocyo Kale | Androidsis
Samsung ayaa hadda xaqiijisay cusbooneysiinta One UI 3.1 ee qalabka 17 ee khadka Galaxy, taas oo dardar galinaysa xawaaraha cusboonaysiinta. Markii ugu horeysay ee la helo nooca nooca cape-ga ah waxay ahayd Samsung Galaxy S20 FE, aalad la soo bandhigay bishii Sebtember iyo tan Aan is barbar dhigno iPhone 12 iyo iPhone 12 Mini.
Imaatinka nambarkan aadka loo wada sugayo ayaa imanaya warka khadka Galaxy S21, aalad u timid guusha Galaxy S20. Shirkaddu waxay ku dhawaaqday in telefoonnada qaabkan lagu helayaa ay kala yihiin: Samsung Galaxy A50, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90, Galaxy A51, Galaxy A71, Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold, Galaxy S20, Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note 20.
Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay ku dhawaaqeysaa bayaanka in Mid ka mid ah UI 3.1 ayaa sidoo kale u imaan doona noocyo kale oo fara badan oo dhexdhexaad ah iyo kuwo heer sare ah toddobaadyada soo socda. Waa tallaabo muhiim ah tartanka si aad u siiso dhammaan macaamiishaada khibrada ugu fiican ee taleefannada horay u lahaa One UI 2.5 iyo wixii ka sarreeya.
1 The 17 daydo gaar ah
2 Cusboonaysiinta ayaa bilaabaysa inay timaaddo maanta
The 17 daydo gaar ah
Liiska lambarrada taleefannada waa sidan soo socota: Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 +, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note Ultra, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A90, Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy A70 iyo Samsung Galaxy A50.
Iyada oo leh hal UI 3.1 ayaa ku imanaya tan astaamo cusuboo ay ku jiraan aaladda alaabta laga qaado, Single Take, Google Discover oo ah ikhtiyaar ikhtiyaar ah, galleello cusub oo loogu talagalay sawirrada iyo fiidiyowga, duubista codka ee isku mar ah, iyo Wadaagga Gaarka ah. Waxay yihiin qaar ka mid ah shaqooyinka kala duwan ee loo isticmaali karo marka aad cusbooneysiiso.
Waa mid ka mid ah cusbooneysiinta qalabka muddo dheer la sugayay oo ka dhigi doona boodbood muhiim ah nooca cusub oo ay ku raaxeysan doonaan malaayiin qof oo adduunka ah. Mid ka mid ah UI 3.1 ayaa markii hore yimid saddexda taleefannada casriga ah ee taxanaha 'Galaxy S21', si hadhow loo geeyo taleefannada kale ee sumadda.
Cusboonaysiinta ayaa bilaabaysa inay timaaddo maanta
Laga bilaabo maanta iyo toddobaadyada soo socda cusbooneysiintu waxay gaari doontaa dalalka kala duwan, iyadoo hadba ku xidhan had iyo jeer waddanka iyo hawlwadeenka. Cusboonaysiinta waxaa lagu ogeysiin doonaa fariin, in kasta oo sidoo kale gacanta lagu raadin karo Settings> Nidaamka iyo cusbooneysiinta> Cusbooneysiinta software-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung ayaa ku dhawaaqday cusbooneysiinta One UI 3.1 ee Galaxy S20, Galaxy Note 20 iyo 15 moodello kale
Warhammer 40.000: Mechanicus ayaa bisha Abriil ku soo dhacaya Android